မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ မိရွှေပ | Mg Ogga's Notes
မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ မိရွှေပ
Mg Ogga / March 8, 2010
မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ မိရွှေပရေ
နင်က ငါ့ သူငယ်ချင်းလည်း ဟုတ်တယ် ငါ့ဆရာမလည်း ဟုတ်တယ် င့ါ အစ်မဆိုလည်း ဟုတ်တယ် ဒီနေ့ နင်မွေးနေ့ ဒီနေမနက် ငါတို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပြီးသွားခဲ့ တယ် နင်မွေးနေကို နင်ကို ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့တယ်နော် ငါတို့ ခင်မင်ခဲ့ကြတာ ၃နှစ်ပဲ ရှိပေမဲ့ ငါတို့တွေက စိတ်တူကိုယ်တူ ရည်မှန်းရာ တူကြတဲ့ အတွက် ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်လို့ပဲ ခင်ကြတယ်နော် နောက် တစ်နောက်လိုအပ်တာ တစ်ယောက်ဖြည့် တစ်ယောက်အားငယ်ရင် တစ်ယောက်အားပေးရင် ဖွံဖြိုးရေး လမ်းမပေါ် အတူလျှောက်ခဲ့ကြတယ် ဆရာမောင်ချောနွယ်ပြောသလို လမ်းချင်းတူလို့ လူချင်းတွေခဲ့ကြတယ်။နောက် ဆရာအောင်ချိမ့်ပြော သလို့
လမ်းတူသွားတဲ့ သူအချင်းချင်းသာ ဒဏ်ရာကိုပြုစု သွေးတိတ်အောင်ကုသလို့ တို့ နောက် လူတွေ လည်းသတိရနေအုံးမယ်
သတဲ့။ငါ စိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ်ကျနေချိန်တွေဆို နင်က ငါရင်ဖွင့်သမျှ နားထောင်ပေးပြီး ဖြစ်သင့်တာတွေကို အင်္ကြပေးတတ်တယ်။ နောက် ငါစပ်ဖြီးဖြီး အမြဲနေတာတောင် ငါစိတ်ညစ်နေတာကို နင်သိတယ် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံရဲ့ မျက်နှာကို ဖတ်တတ်တာ နင်အရည်အချင်းတွေပေါ့ နင်က ငါတတ် ၃နှစ်ကြီးတာတောင် နင်နဲ့ ငါနဲ့ ပြောတာကို နင်လက်ခံတယ်။ ငါတို့ကလည်း နင်နဲ့ ငါနဲ့ ပြောနေပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာနင်ကိုလေးစားပါတယ် မိရွှေပရယ်။ နင် ငါတို့ ဒုက္ခတွေ အတော်ခံရတယ်နော်။
နင်ကို မိရွှေပလို့ ပေးတာ နင်ကြိုက်တယ်မလား မွန်ထုံးစံ မိ ဆိုတာရယ် မြန်မာ တွေ အမှတ်တံဆိပ် ရွှေရယ် နင်နာမည်အရင်း ပပ ရယ်ပေါင်းလိုက်တော့ မိရွှေပပေါ့ နာမည်လေးက မလှဘူးလား မိရွှေပ ! မွန်ဗမာဖြစ်တဲ့ နင်အတွက် ဒီနာမည်လေးက လှပါတယ်ဟာ
နောက် နင်မွေးနေ့ကို ငါတို့ လုပ်ပေးတာနော် ဟိုကောင် သိန်းစိုးကြီးပြောသလိုပေါ့ဟာ မွေးနေ့ဆိုတာ ကာယကံရှင်က လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး တခြားသူတွေက လုပ်ပေးရတာတဲ့ ဂျီးဆက် အသက်ထင်ရှားရှိတုန်းက ခရစ်စမတ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး ဂျီးဆက် မွေးဖွားလာတာကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ခရစ်စမတ်ဆိုတာ လုပ်တာတဲ့။
အဲဒီလို့ပဲ နင်မွေးဖွားလာတာကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ငါတို့က နင်မွေးနေ့ကို ငါတို့ လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ နင်ကိုမွေးဖွားပေးတဲ့ နင်မေမေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူအဖွဲ့ အစည်းအတွက် ဒီထက် အကျိုးဆောင်ရွက်ရင် အမြင့်မြတ်ဆုံးစိတ်ထားနဲ့ ကမ္ဘာကြီး အတွက် အကောင်းဆုံးလူသားတစ်ယောက်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်း
March 8, 2010 in ကျေးဇူးမှတ်တမ်း.
← သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ ပြပွဲ
One thought on “မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ မိရွှေပ”
မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး အရမ်းကောင်းတယ်ညီ။ ခုလို သူငယ်ချင်းအတွက် အမှတ်ရနေတဲ့ ညီ့လို သူငယ်ချင်းကို ရလို့ ဒီကောင်မလေးလည်း ကံကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်မွေးနေ့ ညီ့ကို ပြောထားမှ ထင်တယ်။